Artificial Intelligence Startup 4Paradigm ဟောင်ကောင် IPO ကမ်းလှမ်း မှု သည်မ မှန်ကန် ပါ - Pandaily
Feb 16, 2022, 12:35ညနေ 2022/02/16 14:15:45 Pandaily
ဟောင်ကောင် စတော့အိတ်ချိန်း (HKEx) ၏တရားဝင် ဝက်ဘ်ဆိုက် က အင်္ဂါနေ့ တွင်ဖော်ပြ သည်IPO လျှောက်လွှာ ကို China Artificial Intelligence Startup 4Paradigm မှ တင်သွင်း ခဲ့သည်၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၁၃ ရက်နေ့တွင် ၆ လအတွင်း ကြားနာ ခြင်း မအောင်မြင် သောကြောင့် ပျက်ပြယ် ခဲ့သည်။
4Paradigm ကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင်စတင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး AI ပလက်ဖောင်း နှင့်နည်းပညာ ၀ န်ဆောင်မှုပေး သူဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီသည် ဖောက်သည် ကုမ္ပဏီ များအား AI မှတစ်ဆင့် အသိဉာဏ်ရှိသော အဆင့်မြှင့်တင် မှုများပြုလုပ် ရန်၊ ရိုးရာ စက်မှု လုပ်ငန်းများ အသွင်ပြောင်း ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်ကို အရှိန် မြှင့်တင် ရန်နှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု စွမ်းဆောင်ရည် ကိုတိုးတက်စေရန် အဓိကအားဖြင့် ကူညီ သည်။ 4Paradigm ကို တည်ထောင်သူ Dai Wenyuan သည် Baidu ၏အကြီးအကဲ ဗိသုကာ နှင့် Huawei Noah Ark Laboratory ဖြစ်သည်။
ယခုအချိန်အထိ 4Paradigm တွင် ဖောက်သည် ၈၀၀၀ ကျော်ရှိပြီး စက်မှုနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဘဏ် ၊ China Merchants Bank, PetroChina စသည်တို့ပါဝင်သည်။ လက်ရှိတွင် စီမံကိန်း ၁၂၀၀၀ ခန့်ရှိသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ဇွန် လက ကုမ္ပဏီသည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ထိပ်တန်း ဘက်ထရီ ကုမ္ပဏီ ဖြစ်သော Contemporary Ampere Technology Co., Ltd. (CATL) နှင့် မဟာဗျူဟာမြောက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ရရှိခဲ့သည်။ တရားဝင် ထုတ်ပြန်ချက်အရ CATL သည် 4Paradigm Sage AIOS data management, model online နှင့် model self-learning စသည့် လုပ်ငန်းစဉ် အပြည့်အစုံ AI နည်းပညာ များနှင့် ထုတ်လုပ်မှု ကိရိယာများကို အခြေခံ၍ AI platform တစ်ခုတည်ဆောက် မည်ဖြစ်သည်။ အနာဂတ်တွင် နှစ်ဖက် စလုံးသည် ကုန်ပစ္စည်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ အရည်အသွေး စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ထုတ်လုပ်မှု အချိန်ဇယား ဆွဲခြင်း နယ်ပယ်များတွင် သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ကိုဆက်လက် ပြုလုပ် သွားမည်ဖြစ်သည်။
ႏိုင္ငံတကာ ေစ်းကြက္ ေလ့လာဆန္းစစ္ ေရး ကုမၸဏီ IDC က ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ပထမနှစ်ဝက် အတြင္း AI ေစ်းကြက္ ေ၀ စု နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ ကို မႏွစ္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ Machine Learning အမျိုးအစား တွင် 4Paradigm သည် စတုတ္ထ နှစ် ဆက်တိုက် အများဆုံး ဝေစု ရရှိခဲ့သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:IDC သည် 4Paradigm ကို စက် သင်ယူမှု ပလက်ဖောင်း များတွင် စျေးကွက် ဦး ဆောင် သူအဖြစ် အသိအမှတ်ပြု သည်
ကုမ္ပဏီ၏ အလားအလာ အရ 4Paradigm ၏ ၀ င်ငွေသည် မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း နှစ်စဉ် တိုးပွား လာခဲ့သည်။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၂၀ ခုႏွစ္အထိ သူ႔ရဲ႕ ၀င္ေငြ ဟာ ယြမ္ ၁၂၈ သန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၀) နဲ႔ ယြမ္ သန္း ၄ ၆၀ နဲ႔ ယြမ္ ၉ ၄၂ သန္း အသီးသီး ရွိခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ပထမနှစ်ဝက် တွင် ကုမ္ပဏီ၏ ၀ င်ငွေ သည်ယွမ် ၇ ၈၈ သန်း ရှိ ပြီး၎င်းသည် ၂၀၂၀ ခုနှစ် ၏စုစုပေါင်း ဝင်ငွေ နှင့်နီးစပ် သည်။
ဒါေပမယ့္ ကုမၸဏီက အျမတ္ အစြန္း မရေသး ဘူး။ ၂၀ ၁၈၊ ၂၀၁၉ ၊ ၂၀၂၀ နှင့် ၂၀၂၁ ပထမနှစ်ဝက် တွင်၎င်း၏ လည်ပတ်မှု ဆုံးရှုံးမှု သည်ယွမ် ၃၃ ၆ သန်း၊ ယွမ် ၅၅ ၁ သန်း၊ ယွမ်သန်း ၅၆ ၀ နှင့် ယွမ် ၈၅ ၇ သန်း အသီးသီးရှိသည်။ ကုမ္ပဏီသည် နည်းပညာဆိုင်ရာ သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အကြီးအကျယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ခဲ့သည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ၂၀၂၀ နှင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ပထမနှစ်ဝက် တွင် R & D အသုံးစရိတ် များသည် အလားတူ ကာလအတွက် ၀ င်ငွေ၏ ရာခိုင်နှုန်း အဖြစ် ၁၅၁. ၂% ၊ ၉၀. ၆% ၊ ၆၀% နှင့် ၇၃. ၄% အသီးသီးရှိသည်။
ဇန်နဝါရီလ ၃ ရက်နေ့ တွင်ဟောင်ကောင် စတော့အိတ်ချိန်း (HKEx) မှ ထုတ်ပြန်သော စာရွက်စာတမ်း တစ်ခုအရ AInnovation သည် UBS, CICC နှင့် China Renaissance တို့သည် ပူးတွဲ စပွန်ဆာ များအဖြစ် IPO လျှောက်လွှာ တင်ခဲ့သည်။